Dowladda Pakistan oo u yeeertay safiirka Pakistan ee dalka Sacuudiga kadib cabasho ka timid muwaadiniinteeda ku Nool Sacuudiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda Pakistan oo u yeeertay safiirka Pakistan ee dalka Sacuudiga kadib...
Dowladda Pakistan oo u yeeertay safiirka Pakistan ee dalka Sacuudiga kadib cabasho ka timid muwaadiniinteeda ku Nool Sacuudiga
Dowladda Pakistan ayaa u yeeertay Ambasaddor Rajaa Cali Icjaaz oo ah safiirka Pakistan ee dalka Sacuudiga si wax looga weydiiyo muwadiniinta Pakistan ee kusugan Sacuudiga oo ka ashtikooday Shaqaalaha Safaarada.
Wasaaradda Arrimaha dibada Pakistan ayaa sheegtay in 6 Diplomaasi sidoo kale ay tagi doonaan Pakistaan kuwaasi oo iyagana wax laga weydiin doono sida foosha xun ee loola dhaqmay Shaqaale ka soo jeeda Pakistan oo iyagu ka xamaasha Sacuudiga.
Sidoo kale Waxaa jira Guddi heer sare ah oo loo xilsaaray in qadiyadaan ay si weyn u baaraan.
Previous articleKenya oo sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay’adda UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma 30-ka bisha Juun ee 2022-ka.
Next articleGollaha Deegaanka Degmada Waajid ee Gobolka Bakool oo loo doortay Gudoomiye iyo Guddoomiye Ku-xigeena
Ra’iisla wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa raalli gelin siiyey madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen “Guudlaawe” Raali gelintan ayaa ka danbeysay kagadaal markii maamul...
Taliban oo la wareegtay magaalooyiin muhiim ah
Gabadhii ugu horreeyey ee Soomaaliya uga qayb galaysa ciyaaraha feerka ee...